सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा बिना मगर, अरु कुनमा को ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा बिना मगर, अरु कुनमा को ?
माओबादी केन्द्रवाट बिना मगर सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए।
यसबीच भौतिक पूर्वाधारसहित पर्यटन, भूमिसुधार, खेलकुद लगायतका ६ मन्त्रालय पाउने भनिएको एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने धेरैको चासो छ । करिब एक वर्षका लागि सरकार संचालन गर्ने समय भएकाले मन्त्रालय प्रभावकारी रुपमा चलाउन सक्ने व्यक्ति पठाउनुपर्ने दबाब नेताहरुलाई छ ।
उसो भए तेस्रो व्यक्ति को हो ? जसले सरकारमा जानेहरुको नेतृत्व गर्नेछ ? न्यौपाने र भुसाल नजाने भएपछि सांसदहरुमध्ये विरोध खतिवडा वरिष्ठ हुन् ।
यद्यपी मुकुन्द न्यौपानेबाहेक बेदुराम र विरोध पार्टीमा सिनियर भए पनि यसअघि मन्त्री नभएका कारण सरकारको वरियतामा उनीहरुभन्दा प्रेम आले अगाडि आउछन् । एकपटक मन्त्री भइसकेका कारण बरियताक्रममा उनको नाम पहिले आउँछ ।
स्रोतका अनुसार बिना मगर सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। उनलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए।